कृत्रिम हात हाल्न् भारत पुगेका कृष्ण निकै दुखी हुँदै नेपाल फर्किए, आखिर के भयो उनलाई ? (भिडियो सहित हेरी शेयर गर्नुहोस्) – सुदूरखबर डटकम
कृत्रिम हात हाल्न् भारत पुगेका कृष्ण निकै दुखी हुँदै नेपाल फर्किए, आखिर के भयो उनलाई ? (भिडियो सहित हेरी शेयर गर्नुहोस्)
करेन्ट लागेर दुवै हात र खुट्टा गुमाएका कृष्ण वली केही महिना अगाडि सहयोगको अपिल गर्दै मिडियामा आएका थिए ।उनको दु:ख् पीडा देखेर धेरै सहयोगी मनहरुबाट देश विदेशबाट सहयोग रकम पनि अायो । र केही दिन अगाडि मात्र हात हाल्नको लागि श्रीमती रुपा पुलामी सँगै भारत पुगेेका कृष्ण वली एक हप्ता पछि पुन: नेपाल फर्किएका छन् ।
केही मिडियाहरु मार्फत कृष्ण वलिले कृत्रिम खुट्टा राखेर हिड्न थाले भन्ने खबरहरु आइरहँदा उनिहरुले यो बिषयमा पनि स्पष्टीकरण पनि दिएका छन् । खुट्टा तयार भएपनि हिपको समस्याले अहिले हालेर हिड्न नसकेको बताएका छन् ।